Ilay hazo mahagaga – Malag@sy Miray
Indray andro hono, tao amin’ity fanjakana malaza anankiray, nisy hazo mamoa mahagaga naniry.
Hazo mahagaga: Tsy mila tondrahana izy, nefa tsy mety malazo fa maitso foana na vanim-potoana inona na vanim-potoana inona. Mamy tsy misy toa azy ny voany, sady mahavelona ihany koa, ary raha misy rantsana akana voany alatsinainy, dia miverina misy voany matoy hafa indray eo ny talata maraina. Tsy lanin’olon-tokana koa anefa ny voany anankiray, nefa tsy azo ariana ihany koa fa fadin’ilay hazo. Isam-pianakaviana dia samy manana ny voany voatokana ho azy, fa tsy azo atao ny mifangalatra na mifampindrana. Samy manana tsiro mampiavaka azy hono ny voany tsirairay, kanefa vitsy ihany ny olona no afaka nilaza an’izany satria voarara ny manandrana ny voankazo an’ny fianakaviana hafa, fa izay voatokana ho anao ihany no iaraha-mihinana amin’ny fianakaviana, ary rehefa avy alaina ny voankazo anankiray, dia izay maniry misolo an’iny ihany koa no azo alaina ny ampitso.
Tsy vitan’ny hoe fady sy voarara fotsiny anefa ireny rehetra ireny, fa didy napetraky ny mpanjaka mihitsy hiarovana ny vahoaka sy ilay hazo, satria sady mahatonga aretina toy ny kohaka, fanaviana, sns … ho an’ny mpangala-pihinana ny tsy fanarahana ilay fady, no mahasimba an’ilay hazo ihany koa rehefa ela ny ela.
Nandeha ny volana sy ny taona, nitombo ny tsy firaharahan’ny vahoaka ny didy sy ny fitsipika, ary dia betsaka no narary, ary nisy koa ny maty. Ilay hazo voaota fady ihany koa nisy fahasimbana ka nanomboka nahitana ravina miloko mavomavo.
Nanolo-tsaina ny mpanjaka ity tandapa fetsilahy iray fa hasiana kalo ilay hazo, ka izay mbola manota fady dia hibontsina ny ampitso ihany ny kibony. Neken’ny mpanjaka izany, ary nantenainy fa mba hampahahendry ireto vahoaka; nefa sady nalahelo ny vahoaka ihany koa izy, satria nampahafantarina taminy fa sady mampanaintaina ihany koa ilay kibo rehefa mibontsina.
Nony napetraka ilay kalo dia nisy tokoa ny olona no nibontsina ny kibony, ary tena nanaintaina mafy indrindra sy mila tsy ho zaka ilay kibo nibontsina. Tsy araka ny namisavisana azy anefa, satria tsy nampahahendry ny vahoaka hanaraka ny fadin’ilay hazo akory ny fisian’ilay kalo, fa ody kalo indray no nilofosan’ny vahoaka notadiavina fatratra, mba hahafahany mangala-pihinana amin’ny voankazon’ny hafa ihany nefa koa tsy iharan’ny fanaintainana. Tsy sarotra tamin’ilay tandapa fetsilahy ny nampanamboatra ody kalo, satria izy ihany no nampanamboatra an’ilay kalo, ka dia nivarotra karazana ody kalo anankiroa izy, ary nampanankarena azy haingana tokoa izany. Ny ody kalo iray dia hanina mialohan’ny hihinanana ilay voankazo mahagaga, ka na dia tsy manaraka ny fadin’ilay hazo aza ilay olona mihinana azy dia tsy mibontsina ny kibony sady tsy manaintaina. Io karazany iray io dia namidiny mora ary naparitany eraky ny fanjakana. Ny karazany anankiray dia ody kalo itsaboana izay efa mibontsina kibo, ka mampihena ny fanaintainana. Io indray dia tsy ahitana betsaka sady namidiny lafo, satria noho ny tsy fahazakana ilay fanaintainana dia mividy an’io foana izay olona voan’ilay kalo.
Fantatry ny mpanjaka ihany anefa ny teti-dratsin’ilay tandapa fetsilahy, ka nalahelo indrindra izy raha nahita fa lasa ilay kalo nokasaina hanampy ny olona tsy hanota fady indray no nataon’ny vahoaka fahavalo nitadiavana fanafodiny, fa tsy nohararaotiny handresena ny fakampanahy amin’ny fangalaram-pihinana. Lasa ilay aretin-kibo mibontsina sisa no hitan’ny mason’ny vahoaka sy noezahiny nialana fa tena voka-dratsin’ny ota fady amin’ilay hazo mahagaga, toy ny kohaka sy ny fanaviana, ary ny fahasimban’ilay hazo mahagaga tsy nosaininy intsony, satria sady tsy mihatra eo no eo, no tsy manaintaina mafy ihany koa.
Par Dotmg 9 Commentaires
1 décembre 2007 à 16:24
Ankamatatra ‘zany ?
Ny vahoaka = Malagasy
Ny mpanjaka = Ra8
Afa-po aho fa mba ampio ry zareo fa tsy mety ho hitako mihintsy ny anaran’ilay « tandapa fetsilahy »
Sa ve mitady lavitra aho fa angano, angano … arira, arira
1 décembre 2007 à 17:10
Izany ka angano mendrika ny ankehitriny! Fa inona moa no idiran’ny tandapa fetsilahy? Mety ho eran’izao tontolo izao anie ny fanjakan’ilay mpanjaka fa tsy faritra kely fotsiny e!
Misaotra an’i dotmg fa nitantara angano koa ianao. Izaho manko efa nanao anankiroa fa asa ana azon’ny olna ilay izy tamin’izany na tsia… vitsy loatra manko ny naneho hevitra!
1 décembre 2007 à 17:11
Ho an’izay tsy mety mahazo ny ankamantatra na kely dia kely aza, mariho fa manomboka ny volana isika izao! Fa enga anie ho azonareo rehetra mamaky ilay izy
2 décembre 2007 à 9:57
Tsy alefako lavitra ny ahy ny saiko fa angano angano arira arira dia mety amiko aloha anio, efa elà mantsy aho tsy nahare (tsy namaky).
Fa satria tsy tantiko ihany…dia
…ny ahy ny hafatra voaraiko manokana eto dia hoe raha te hanambola dia ny efa misy eo ihany no simbaina dia iny ihany no itadiavana vahaolana.
Tsy azo lavina ihany koa ohatra ny hevitry Tomavana…
Fa raha ny tena marina dia arakaraky ny misy ny tsirairay angamba ny fiantraikany e?! sa ahoana …
3 décembre 2007 à 6:18
Tomavana> Tsia, tsia, tsia.
Jentilisa> Na fanjakana inona na fanjakana iza dia matetika anankiray amin’ny mpiray latabatra amin’ny mpanjaka ihany no tena mikonona ny fanonganana sy famotehana. Tsy ny orinasa mpamboatra an’ilay « kalo » no tifirin’ny angano eto, fa ilay « ati-doha » mamitaka ny vahoaka.
Ikalakely> Tsy tao an-tsaiko iny kanefa dia saika ny sehatra rehetra tokoa dia ahitana an’io.
4 décembre 2007 à 0:55
[quote comment= »1591″]Tomavana> Tsia, tsia, tsia.
Ikalakely> Tsy tao an-tsaiko iny kanefa dia saika ny sehatra rehetra tokoa dia ahitana an’io.[/quote]
Ny ahy indray dia ny aretina SIDA no alehan’ny saiko. Mpanentana ny vahoaka hiady ami’ny fijangajangana sy ny fomba mamohetra isan-karazany mety ihanahan’io aretina io mantsy aho no sady mahita ilay marika menamena be mitsirara eo ambony lahatsoratra io. Ny firaisana ara-nofo no ilay voankazo izay. Natokana ho an’ny mpivady ihany izy io. Tsy hoe an’ny efa manam-bady fa tena hoe « an’ny mpivady ». Izany hoe tsy azo atao ny mifamadibadika olona hanaovana ny firaisana eo amin’ny samy efa manam-bady. Vokatry ny tsy fanajana io fomba tsara io dia teraka ny aretina fa samy manana ny toe-batany moa ny tsirairay. Tany am-piandohana dia tao ny angatra sy ny sodipiso sy ny aretina hafa azo avy amin’ny firaisana ara-nofo. Ka te hilaza aho hoe ny mpanjaka eto dia Andriamanitra izay nanao ny firaisana ara-nofo ho sady antoky ny fitohizan’ny taranaka no ho fahafinaretan’ny mpivady fa « sady mamy tsy misy toa azy izy, hoy ny mpanoratra, no mahavelona ». Rehefa tena mirongatra ny fijangajangana manerana ny tany, rehefa tsy mety fay amin’ny aretina mahazo azy ny olona dia alefan’ny devoly ny SIDA. Ao ny vahaolana famerezan-dia arosony mba tsy hahavoakitika ilay olana fototra ka revo any izao tontolo izao. Kapaoty sy ny fanafody iadivana amin’ireo otrik’aretina efa tafiditra no imasoana mafy izao fa tsy ny hoe: »Aoka tsy hijangajanga! ». Izay re no takatra ry Dotmg ka asa raha mba manakaiky ny tsato-by fa ny hevitra moa tera-bary. Tena voalalina tsara ny angano nosoratanao ary raha vao mahita ny hevitra voalohany ny mpamaky dia mihanjahanja daholo sady mora raisina ny hevitra manaraka rehetra. Eto amin’ny varavaran-keliko no hitazanako an’izany fa mino aho hoe mety hahita lafiny hafa ny sasany avy eny amin’ny varavaran-keliny. Mba omenao ho azoko ampiasaina hanaovana fanentanana amin’ny ady amin’ny SIDA ve izy ity? Misaotra betsaka e!
4 décembre 2007 à 1:04
Ny ahy indray dia ny aretina SIDA no alehan’ny saiko. Mpanentana ny vahoaka hiady ami’ny fijangajangana sy ny fomba mamohetra isan-karazany mety ihanahan’io aretina io mantsy aho no sady mahita ilay marika menamena be mitsirara eo ambony lahatsoratra io. Ny firaisana ara-nofo no ilay voankazo izay. Natokana ho an’ny mpivady ihany izy io. Tsy hoe an’ny efa manam-bady fa tena hoe « an’ny mpivady ». Izany hoe tsy azo atao ny mifamadibadika olona hanaovana ny firaisana eo amin’ny samy efa manam-bady. Vokatry ny tsy fanajana io fomba tsara io dia teraka ny aretina fa samy manana ny toe-batany moa ny tsirairay. Tany am-piandohana dia tao ny angatra sy ny sodipiso sy ny aretina hafa azo avy amin’ny firaisana ara-nofo. Ka te hilaza aho hoe ny mpanjaka eto dia Andriamanitra izay nanao ny firaisana ara-nofo ho sady antoky ny fitohizan’ny taranaka no ho fahafinaretan’ny mpivady fa « sady mamy tsy misy toa azy izy, hoy ny mpanoratra, no mahavelona ». Rehefa tena mirongatra ny fijangajangana manerana ny tany, rehefa tsy mety fay amin’ny aretina mahazo azy ny olona dia alefan’ny devoly ny SIDA. Ao ny vahaolana famerezan-dia arosony mba tsy hahavoakitika ilay olana fototra ka revo any izao tontolo izao. Kapaoty (tsy lafo) izay fitaovana apetaka alohan’ny hanaovana firaisana sy ny fanafody(lafo be)iadivana amin’ireo otrik’aretina efa tafiditra no imasoana mafy izao fa tsy ny hoe: »Aoka tsy hijangajanga! ». Izay re no takatra ry Dotmg ka asa raha mba manakaiky ny tsato-by fa ny hevitra moa tera-bary. Tena voalalina tsara ny angano nosoratanao ary raha vao mahita ny hevitra voalohany ny mpamaky dia mihanjahanja daholo sady mora raisina ny hevitra manaraka rehetra. Tena mbola te hamelabelatra lava aho fa efa ao amin’ny ezaka fanafohezana izao ka atao ampy ny vita hatreto. Marihana koa fa eto amin’ny varavaran-keliko no ahatazanako an’izany ka mino aho hoe mety hahita lafiny hafa amin’ity lahatsoratra kanto loatra ity ny sasany avy eny amin’ny varavaran-keliny. Mba omenao ho azoko ampiasaina hanaovana fanentanana amin’ny ady amin’ny SIDA ve izy ity? Misaotra betsaka e![/quote]
4 décembre 2007 à 9:23
Eka, ilay tandapa fetsilahy dia ny devoly (mpino kristianina i DotMG), fa raha hitantara an’ilay angano amin’ny olona tsy kristianina dia manana anarana hafa anondroana azy ny hafa (force du mal, fahavalon’ny natiora, …)
PS: ilay ruban menamena dia taorian’ny fanamarihan’i Tomavana vao napetrako.
Anteriko fa DotMG dia tsy manohitra ny ady amin’ny SIDA, fa manainga ny tompon’andraikitra sy ny sarambabembahoaka kosa hoe ny fitaovana mahomby entina miady amin’ny SIDA dia ny ABSTINENCE irery ihany. Ny aretina tsy voaaron’ny fimailo dia ny homamiadana (prostate, …), fa indrindra ny aretim-panahy. Efa aretin’ilay hazo mahagaga izao ny fisian’ny relation homosexuelle, satria efa tsy mahaonona ny olona intsony ny firaisana arak’izay namoronana azy.
Mazava ho azy fa dia malalaka ny zo amin’ny fampiasana an’io asa soratra io.
Toy izao no votoatin’ny lisansy Creative Commons,
* to Share » to copy, distribute and transmit the work
* to Remix » to adapt the work
Raha adika tsotsotra dia azo adika, zaraina,(aparitaka) ampitapitaina, asiana fanovana ilay soratra, fa ny takiana dia ny filazana hoe i DotMG no nanao azy voalohany (na hita ao @ malagasymiray.net ilay tantara), ary ny tsy fanampianao droit d’auteur hafa amin’izay dika na fanovana atao amin’ny asa. Ho fanampin’izay dia hasiako zo manokana tsy voafehin’io fepetra io àry ho an’ny fampiasana azy ho amin’ny ady amin’ny SIDA, mba tsy ho voatery hilaza ny source nahitana ny tantara ianao.
17 décembre 2010 à 13:41
Mahay lay namorona ilay tantara e!